Jiri Yammer nweta ụwa kachasị mma maka azụmaahịa gị
Yammer na-arụ ọrụ
Satọde, 23 Juun 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Tupu mkparịta ụka anyị na Fraịde na Harold Jarche, anụtụbeghị m banyere okwu ahụ arụ ọrụ. Kemgbe Septemba gara aga, ụlọ ọrụ na-azụ ahịa inbound abụrụla ndị asambodo Usoro ebe ọrụ. ROWE bụ Nsonaazụ Ọrụ Naanị… nke a na-enye ndị ọrụ ọrụ ka ha rụọ ọrụ dịka ha chọrọ ma ọ bụrụhaala na ọrụ achọrọ.
Dịka otu obere otu, otu nsogbu anyị nwere ROWE na-agwa ibe anyị okwu. Offọdụ n'ime anyị na-aza site na email, ụfọdụ site na ekwentị, na ụfọdụ ọlị (dị ka m!). Mgbe m gbadara ala n’ọrụ m, ana m asị n’eziokwu nkwụsịtụ. Ma nke ahụ adịghị mma nye ndị ahịa m ma ọ bụ ndị ọrụ ibe m… ndị na-anwa mgbe ụfọdụ ịchụ m.
David achọpụtala nsogbu na òtù ndị ọzọ na-efunahụ arụmọrụ site na ọtụtụ ozi ịntanetị na ọtụtụ nzukọ… ghara ikwe ka ndị ọrụ nweta ọrụ ahụ. O kwuru na ụfọdụ ndị otu tụgharịrị na Workstreaming. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, Workrụ ọrụ n’ọrụ na-enye usoro nkwukọrịta nke anaghị egbochi ndị ọrụ ma na-enyekwa ndị nọ gị nso aka ịghọta ihe ị na-arụ, mgbe ị ga-achọ enyemaka, na mgbe ị ga-atụ anya nsonaazụ. O yiri ka Yammer nwere ike ịbụ nnukwu ngwá ọrụ maka nke a!
Yammer dị mfe iji ngwa micro-ịde blọgụ dị ike nke na-ejikọ ndị mmadụ na ọdịnaya n'ofe oge na ohere. Ọ na-arụ ọrụ dịka Facebook ma ọ bụ Twitter, ihe dị iche bụ na ebe Facebook na-elekọta ngalaba ọha, Yammer na-arụ ọrụ naanị maka azụmaahịa, na-enye ụlọ ọrụ ohere ịhazi sọftụwia mmekọrịta mmekọrịta nke onye ọrụ iji jikọta ndị ọrụ, ndị mmekọ ọwa, ndị ahịa na ndị ọzọ bara uru. yinye.
Otu onye na-elekọta mmadụ dị ka Yammer na-enye ọtụtụ ụlọ ọrụ uru. Ọ na - eme ma na - enye ndị ọrụ ike, na - agbalite usoro ọrụ, na - eme ka arụpụta ihe na ume ọhụrụ. Ihe ọ rụpụtakwara ozugbo. Dịka ọmụmaatụ, Yammer na-enye ngwa ọrụ na-arụ ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji jikọọ talent na teknụzụ gbasaa n'ụwa niile maka ndị ahịa na ndị ahịa, na-enye ha ohere itinye aka na atụmatụ ma bido mkpọsa na enweghị nsogbu.
Nchegbu bụ isi banyere ebe nrụọrụ weebụ ịkparịta ụka n'isntanet bụ nchekwa data. N'iji Yammer mee ihe dị iche (n'elu Facebook na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ, nke ahụ bụ) ịbụ nzuzo na nchekwa nke data, ọnụ ụzọ ahụ na-aga njem ahụ ọzọ iji hụ na nchekwa dị elu. Yammer na-ejikọ nyocha nche na atụmatụ, prototype, na nkenye ọnọdụ. Njikọ niile na-aga site na SSL / TLS, data na-asọ site na firewalls ezi uche dị ala iji gbochie ịpụpụ n'ofe netwọkụ. Sava ngwa weebụ na-anọgide n'ụzọ anụ ahụ na n'ụzọ ezi uche dị na ya site na sava data. Nchedo ndị a, gbakwunyere ọsọ ndị ọzọ na-arụ ọrụ nche igwefoto dịka elekere vidio elekere anya, ihe mkpuchi biometric na pin, njikwa njikwa ndị ọrụ siri ike, ndekọ nkọwa zuru ezu nke ndị ọbịa, usoro ntinye aka na ntụkwasị obi nzuzo, nkwenye siri ike na ndị ọzọ na-ahụ maka elu notch nche.
Laghachi na Ọrụ. Nyere ihe ịma aka dị iche iche dị iche iche anyị, usoro ihe omume, ọnọdụ na omume ọrụ… tinye Yammer nwere ike bụrụ nnukwu ụzọ anyị niile iji na-esoro ibe anyị. Kama ịkpọ m onye nrụpụta m, enwere m ike ịlele Yammer wee hụ ihe ọ na - eme maọbụ mgbe ọ ga - adị! Nke a abughi ihe bara uru nye obere azụmaahịa… chee na nkwukọrịta na mbelata ụba nke ụlọ ọrụ nwere ike inwe!
Yammer nwekwara ma desktọọpụ na mobile ngwa enwere, njikọta Skype, yana ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ.
Tags: nkwukọrịta mmekọrịtaarụ ọrụjikwaa
Jun 25, 2012 na 4: 15 PM
Akụkọ na-atọ ụtọ taa nke Microsoft zụtara Yammer. Echere m na ọ bụ nnukwu mmegharị!
Jun 26, 2012 na 10: 49 PM
Ekwesịrị m ikwu - ọ na-atọ m ụtọ iji ngwa a. Naanị ihe m chọrọ bụ ịkwanye. Na-ebelata ozi-e, na-eme ka ndị ọrụ ibe gị mara, ma na-echekwa ọrụ. Ọ dị ka Facebook, mana naanị maka ebe ọrụ!